Fitaterana Itaosy – Nibahan-dalana indray ny zotra 133 - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitaterana Itaosy – Nibahan-dalana indray ny zotra 133
Omaly antoandro no nitokona ireo mpitatitra amin’ny zotra 133
Tsy mety miravona ny olana misy eo amin’ireo mpitatitra eny Itaosy sy ny mpitandro ny filaminana. Naneho ny tsy fankasitrahany tamin’ny alalan’ny fibahanan-dalana sy filanjana sora-baventy indray ireo taksiben’ny zotra 133 omaly, nanomboka tamin’ny 11 ora antoandro ka hatramin’ ny 12 ora. »Tazonina any amin’ny biraon’ny kaomisaria ny namanay, nefa tsy nisy fahadisoana nataony. Ny fangalana ny taratasin’ny fiara sy fampiantsoana ny mpamily no tena tsy rariny mihatra aminay », hoy ireo mpamily amin’ity zotra.
Fitaterana, Itaosy, Mpanoratra Rijakely, 30.06.2012, 08:46	FIARAHAMONINA